Wagerr စျေး - အွန်လိုင်း WGR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Wagerr (WGR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Wagerr (WGR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Wagerr ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
WGR – Wagerr
Market ကဦးထုပ်: $5 345 244.00
volume_24h_usd: $49 664.40
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Wagerr တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Wagerr များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
WagerrWGR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0306WagerrWGR သို့ ယူရိုEUR€0.026WagerrWGR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0234WagerrWGR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0279WagerrWGR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.274WagerrWGR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.193WagerrWGR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.678WagerrWGR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.114WagerrWGR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0405WagerrWGR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0428WagerrWGR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.68WagerrWGR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.237WagerrWGR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.164WagerrWGR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.29WagerrWGR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.17WagerrWGR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.042WagerrWGR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0469WagerrWGR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.953WagerrWGR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.213WagerrWGR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.27WagerrWGR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩36.33WagerrWGR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦11.86WagerrWGR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.25WagerrWGR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.841
WagerrWGR သို့ BitcoinBTC0.000003 WagerrWGR သို့ EthereumETH0.00008 WagerrWGR သို့ LitecoinLTC0.000563 WagerrWGR သို့ DigitalCashDASH0.000337 WagerrWGR သို့ MoneroXMR0.000344 WagerrWGR သို့ NxtNXT2.39 WagerrWGR သို့ Ethereum ClassicETC0.00451 WagerrWGR သို့ DogecoinDOGE8.83 WagerrWGR သို့ ZCashZEC0.000372 WagerrWGR သို့ BitsharesBTS0.943 WagerrWGR သို့ DigiByteDGB0.979 WagerrWGR သို့ RippleXRP0.109 WagerrWGR သို့ BitcoinDarkBTCD0.00106 WagerrWGR သို့ PeerCoinPPC0.102 WagerrWGR သို့ CraigsCoinCRAIG13.95 WagerrWGR သို့ BitstakeXBS1.31 WagerrWGR သို့ PayCoinXPY0.534 WagerrWGR သို့ ProsperCoinPRC3.84 WagerrWGR သို့ YbCoinYBC0.00002 WagerrWGR သို့ DarkKushDANK9.82 WagerrWGR သို့ GiveCoinGIVE66.31 WagerrWGR သို့ KoboCoinKOBO6.97 WagerrWGR သို့ DarkTokenDT0.0282 WagerrWGR သို့ CETUS CoinCETI88.42
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 10:30:03 +0000.